Ikhaya » Izindaba Zamuva » Abantu » ITobago Tourism Agency iqoka i-CEO yayo yokuqala ngqa
Izindaba Zezinhlangano • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Industry Hospitality Industry • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • I-Trinidad neTobago Breaking News
U-Louis Lewis uqokwe njenge-Chief Executive Officer yokuqala ye-Tobago Tourism Agency.
Uphiko Lwezokuvakasha, Amasiko kanye Nezokuthutha, kanye nebhodi leTobago Tourism Agency, bayajabula ukumemezela ukuqokwa kukaMnu. Louis Lewis njengoMphathi Omkhulu wokuqala wenhlangano.
UMnu Lewis usanda kusebenza kwiBhodi Yezokuvakasha yaseSanta Lucia kusukela ngoFebhuwari 2008 kuya kuJanuwari 2017, ngokwesikhundla sokuba nguMqondisi Wezokuvakasha, kanye neSikhulu Esiphezulu.
Kusukela ngo-2003 kuya ku-2006 uMnu Lewis wasebenza njengoMqondisi Wezindaba Zomnotho eSanta Lucia eMnyangweni Wezezimali Nezomnotho, lapho ayephethe khona ukwenziwa kohlelo lwenqubomgomo yesabelomali. Ngemuva kwalesi sikhundla, waqokwa njengoNobhala Ongunaphakade eMnyangweni Wezohwebo, Wezohwebo, Wezokutshalwa Kwezimali kanye Nezindaba Zabathengi, ngaphambi kokuba aqokwe njengoNobhala Ongunaphakade eMnyangweni Wezokuvakasha Nezokundiza Komphakathi.
Ngawo-1990 uMnu uLewis wayephethe izikhundla ezivelele ezinhlakeni zikahulumeni ezibalulekile zaseSanta Lucia, okubandakanya nokuba yiNhloko yoMnyango Wezocwaningo eSt.Lucia Tourist Board, njenge-Economist noMnyango Wezezimali, kanye ne-Economic Statistician ne I-Eastern Caribbean Central Bank endlunkulu yayo eSaint Kitts.
Isizinda esingefani sikaMnu Lewis sihlanganisa imikhakha ye-Tourism Research and Marketing, Economics, Statistics, Consumer Research, Marketing, kanye ne-Project Management. Isipiliyoni sakhe simhlomise ngokuqonda okungenakuqhathaniswa ekuhlelweni kokuthuthukiswa kwamasu, futhi simbeka esimweni esiyingqayizivele sobungcweti.
Amagalelo akhe emkhakheni wezokuvakasha abanzi futhi afaka:
• Ukuvuselela isithombe seSanta Lucia ezimakethe ngokusebenzisa izivivinyo ezimbili eziphumelelayo zokubeka uphawu ku-2009 nango-2013 ngokulandelana, kanye nokuqala enye ngo-2016.
• Ukuhola izingxoxo eziphumelelayo zokukhuphula izindiza eziya eSaint Lucia, ikakhulukazi imvamisa eyandisiwe neAmerican Airlines, iDelta neVirgin Atlantic; kanye nezinsizakalo ezintsha nezandisiwe ngeBritish Izindiza, iJetBlue, iZwekazi, uThomas Cook noCondor.
• Ukufaka amasu amasha ocwaningo enqubeni yokuhlela ukuqinisekisa indlela yamasu wokuThuthukiswa koMkhiqizo futhi kuthuthukise kakhulu ukusebenza kahle kokumaketha.
• Ngihola phambili ekusungulweni kohlelo lwamasu lweminyaka emihlanu lweBhodi Yezokuvakasha yaseSanta Lucia yowezi-2012 kuya kowezi-2016.
• Ukuhola ukuhlela kabusha abasebenzi beBhodi Yezokuvakasha yaseSanta Lucia ngonyaka wezi-2015.
• Ukuhola ekusungulweni kohlelo lokulawulwa kwezinhlekelele embonini yezokuvakasha eSaint Lucia.
• Ukugcinwa kokusebenza kwezezimali kweBhodi Yezokuvakasha yaseSanta Lucia ngaphakathi kwesabelo sezimali onyakeni ngamunye olandelanayo, ukuletha inani elifanele lemali, nokuqinisekisa ukuthi konke ukucwaningwa kwamabhuku kusesikhathini kuze kube sekupheleni kwesikhathi.
Ophothule iziqu ze-University of the West Indies - Cave Hill, oneBachelor's Degree in Economics, uMnuz Lewis ubuye abe neMasters of Business Administration yakulesi sikhungo, futhi uyiCredified Bank Examiner, neProject Management Professional.
IDivision of Tourism, Culture and Transportation, kanye neTobago Tourism Agency Board, banesiqiniseko sokuthi uMnu Lewis unamakhono, ulwazi nobungcweti bokuqhubekisela phambili iDestination Tobago. Zombili lezi zinhlangano zimfisela okuhle kodwa kule ndima entsha futhi babheke phambili eminikelweni yakhe ekuthuthukiseni umkhakha wezokuvakasha esiqhingini.